West Los Angeles ရှိကွန်ယက်တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် Wilcon Enhances Award ဆုရရာသီကိုရရှိသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Wilcon Enhancer ဆုကိုအနောက် Los Angeles မှာရာသီရဲ့အရောကွန်ယက်နှင့်အတူချဲ့
Wilcon Enhancer ဆုကိုအနောက် Los Angeles မှာရာသီရဲ့အရောကွန်ယက်နှင့်အတူချဲ့
Los Angeles, ဇန်နဝါရီ 27, 2016 - အကြားတိုက်ရိုက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့် Los Angeles မြို့ နှင့်နယူးယောက်မြို့မကြာမီ၏မကြာသေးမီက-ပြီးစီးခဲ့တိုးချဲ့ကျေးဇူးတင်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မည် Wilcon ရဲ့ အနောက်နိုင်ငံများတွင် State-Of-The-အနုပညာ, fiber-optic ကွန်ယက်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများ Los Angeles မြို့။ အဆိုပါ ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြားစင်တာ (PacTV) မော်တော်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိဖျော်ဖြေရေးဂီယာစက်ရုံ, ဖြန့်ဖြူးအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ Wilcon ရဲ့ကျယ်ပြန့် optical network ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
"high-definition ဗီဒီယိုအဆိုပါအသက်အရွယ် compressed လုပ်မထားတဲ့အကြောင်းအရာလျင်မြန်စွာကူးစက်ဘို့အမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖန်တီးထားပါတယ်," Jon DeLuca, Wilcon ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားသည်။ "ဒီဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုံခြုံရေးလိုအပ်ကြောင်းနှင့် Wilcon အမြဲ fiber-optic ကွန်ယက်ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ 2016 ဝင်အဖြစ် PacTV နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏မိတ်ဖက်ကိုထပ်တိုးဖို့ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ "
ဆုပေးပွဲရှိုးများ, အားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြား Real-time programming ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိသည်နှင့်ယင်းမော်တော်ရိပ်သာလမ်းအချက်အချာသို့မှောင်မိုက်ဖိုင်ဘာနှင့်ကွဲပြားခြားနား entry ကိုလမ်းကြောင်း၏ Wilcon ရဲ့နိဒါန်းမှ Ultra-broadband ဝန်ဆောင်မှုကျေးဇူးတင်စကား secure ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအခြေခံအဆောက်အအုံ Wilcon ရဲ့လက်ရှိ 3,000-မိုင်ကွန်ရက်အဖြစ်အပိုဆောင်းအသစ်ဆောက်လုပ်ထား fiber-optic အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးချ။
"ကျနော်တို့က 2015 ကတည်းက Wilcon အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်," Jakob Nielsen, ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြားစင်တာဖြန့်ကျက်အင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကအမြဲထုတ်လွှင့်ထိရောက်မှုဖြစ်မည်, Wilcon ကျွန်တော်တို့ကိုအလှည့်တွင်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကျေနပ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့် clients များကိုပေးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့လာနှစ်ပေါင်းတစ် Wilcon မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသည်။ "
အနောက်ကမ်းခြေတယ်လီရှေ့ဆောင် Wilcon Downtown ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူစတင်, 18 နှစ်ပေါင်းဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်အတွက်ရှေ့တန်းမှမှာခဲ့ Los Angeles မြို့1998 တွင် 'ပထမဦးဆုံး fiber-optic အချက်အချာ။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Wilcon အကောင်းဆုံး-In-class ကို fiber optic ကွန်ယက်နှင့်ဒေတာစင်တာကိုအခြေခံအဆောက်အဦများဝန်ကြီးချုပ်အနောက်ကမ်းခြေပံ့ပိုးပေးသည်။ တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအကြီးဆုံး fiber optic ကွန်ယက်ကိုတစုံတပါးကဲ့သို့, Wilcon နီးပါးအဓိကဒေတာစင်တာများချိတ်ဆက်ကွဲပြားခြားနားလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူဖိုင်ဘာ၏ 3,000 လမ်းကြောင်းမိုင်, လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့်ဒေသတွင်းလျှောက်လုံးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုဒ်များတစ်ကျယ်ပြန့်လက်လှမ်းမမီပေးထားပါတယ်။ Wilcon မှောင်မိုက်ဖိုင်ဘာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Ultra-broadband optical န်ဆောင်မှုများ, ကြိုးမဲ့သယ်ဆောင်နှင့်၎င်းတို့၏မစ်ရှင်-အရေးပါဒေတာအသွားအလာနှင့် application များအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သေချာအခြားဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးကယ်တင်တတ်၏။ Wilcon လည်းမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဦးဆောင်သည့်ဒေတာစင်တာနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော-ကြားနေ colocation အဆောက်အဦပိုင်ဆိုင်လည်ပတ် Los Angeles မြို့, တ Wilshire အဆောက်အဦးမှာ၎င်း၏သော့ချက်အချက်အချာအပါအဝငျ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.wilcon.com သို့မဟုတ် + 1 (888) -600-2800 မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် [အီးမေးလျ protected].
ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြား Center ကအကြောင်း
35 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Los Angeles မြို့, ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြား Center ကဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုအတွက်၎င်း၏ client များတဝိုက်-The-နာရီထောက်ခံမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှဦးဆောင်ဂီယာနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးနဲ့ပါတ်သက် ဂြိုဟ်တု ညှိနှိုင်းခံယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းများ, Multi-format နဲ့တိပ်ကစားတနေရာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရိုက်ချက်များ, ဂြိုဟ်တု မီဒီယာခရီးစဉ်နှင့်နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့။ ဒေသခံတစ်ဦးအဆင့်တွင်၎င်း၏ထုတ်လွှင့်စက်ရုံအတွက် Los Angeles မြို့ အဆိုပါ AT & T ချိတ်ဆက် ဟောလိဝုဒ် hub နှင့် The Switch Los Angeles မြို့; New York မှာ, က / Waterfront, အဆိုပါပြောင်းလဲမည်နယူးယောက်နှင့် Azzurro ခြုံငုံချိတ်ဆက်; နှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိ၎င်း၏စက်ရုံအဆိုပါ BT မျှော်စင်နှင့်ကနေအများအပြားဆားကစ်ရှိပါတယ်။ အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို PacTV ရဲ့ ENG ထရပ်ကားကနေတဆင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု, ဗြိတိန်, သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, စင်္ကာပူ, ကနေဒါနှင့်ပြင်သစ်အပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြားကမှဝယ်လိုအားနှင့်ဖိုင်ဘာကွန်ယက်ပေါ်တွင် downlink ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အစိုင်အခဲဂုဏ်သတင်းကို ABC ရုပ်သံ, CBS အပါအဝင်အဓိကကွန်ရက်များနှင့်အတူအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးမှဦးဆောင်ခဲ့ပြီး အား NBC, FOX, ဗြိတိန်အတွက် ESPN, CNN BSkyB နဲ့ BBC, သြစတြေးလျအတွက်ကွန်ယက်တစ်ဆယ်က Sky နယူးဇီလန်၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် AboveNet / Zayo, SingTel အပါအဝင်ထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်း, Intelsat, SES ကမ္ဘာ့ဖလားကောင်းကင်, ဗြိတိသျှတယ်လီကွန်း, Colt, Nexion နှင့်အဆင့်3/ VYVX ။ ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြားစင်တာအလည်အပတ်ခရီးနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.pactv.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော PacTV တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-27
ယခင်: Encoding.com ယင်း၏ 2016 ကို Global Media ကို Format ကိုအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
နောက်တစ်ခု: SCREENLIGHT, ပထမဆုံးဖြန့်ချိ, အခမဲ့ MARKER Import add-on ကို Adobe Premiere Pro အတွက်